Fantaro ny taonan’ny famindram-po » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
« Hafatry ny Fivondronam-ben’ny eveka, novambra 2015
Akon’ny famaranana ny taon-jôbily »
Hanomboka amin’ny 8 desambra 2015 ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 20 novambra 2016 ny Jôbily manokan’ny famindram-po.
« Mpamindra fo tahaka ny Ray », notsoahina tao amin’ny Lk, 6-36, io ny teny ho enti-miaina sy mandalina ity taon-jôbily ity. Entanina isika hiaina ny famindram-po tahaka an’Andriamanitra Ray. Tsy mitsara ary tsy manameloka fa mamindra fo, mizara fitiavana sy famelana tsy misy fetra.
Manamafy io lohahevitra io ny sary famantarana nataon’i mompera Marko Rupnik, maneho an’i Jesoa, mitondra eo an-tsorony ny olona nania. Hevitra roa no fonosin’ireo loko matroka eo afovoany ary mihamazava miandàlana.
Eo ny fialantsika amin’ny haizina ka mizotra mankany amin’ny hazavana rehefa miaraka amin’i Kristy. Saingy eo indrindra koa ny halalin’ny fitiavan’Andriamanitra, tsy taka-takarina, mamela ny zavatra rehetra.
Hosokafan’i Papa Fransoa ny varavarana masin’ny Bazilikan’i Md Piera, ny 8 desambra 2015, ho mariky ny fiantombohan’ny taon-jôbily.
Tsidiho ny www.iubilaeummisericordiae.va hahitanao ny antsipiriany.